Football Khabar » पूर्वक्लब बार्सिलोनाविरुद्ध भिड्नुअघि इनिएस्टाले लेख यस्तो भावुक पत्र !
पूर्वक्लब बार्सिलोनाविरुद्ध भिड्नुअघि इनिएस्टाले लेख यस्तो भावुक पत्र !
प्रि–सिजनअन्तर्गत दुई दिनपछि स्पेनिस बार्सिलोनाले जापानमा राकुटेन कप खेल्दैछ । सो प्रतियोगितामा बार्सिलोनाले जापानी क्लब भिसेल कोबे र इंग्लिस क्लब चेल्सीसँग खेल्नेछ । उसले पहिलो खेल चेल्सीसँग खेल्दैछ ।
त्यसपछि जुलाई २७ मा जापानी क्लब कोबेसँग दोस्रो खेल हुनेछ । कोबे त्यही क्लब हो, जहाँबाट बार्सिलोनाका पूर्वस्टार खेलाडी तथा पूर्वकप्तान आन्द्रेस इनिएस्टा खेल्छन् । अघिल्लो वर्ष बार्सिलोना छाडेर कोबे पुगेका इनिएस्टाले पहिलोपटक आफ्नो पूर्वक्लब बार्सिलोनाविरुद्ध खेल्न लागेका हुन् । यस खेलमा उनले खेल्ने पक्का भइसकेको छ ।
बार्सिलोना तथा पूर्वसहकर्मीहरूविरुद्ध उत्रिनुअघि इनिएस्टाले बार्सिलोनालाई एक भावनात्मक पत्र लेखेका छन् । इनिएस्टाले लेखेको सो पत्रलाई बार्सिलोनाले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । सो पत्रमा उनले बार्सिलोना छाडेपछि कोबेमा बिताएको एक वर्षको बारेमा बताएका छन् । केही भावनात्मक अनुभव बाँडेका छन् ।
त्यसैगरी, उनले पूर्वक्लबविरुद्ध खेल्न लाग्दा त्यसबारे पनि भावना साटेका छन् । उनले पूर्वहसकर्मीहरूविरुद्ध खेल्दा आफ्ना लागि त्यो भावनात्मक खेल हुने पनि बताएका छन् ।
‘जुलाई २२ मा भिसेल कोबेमा मैले डेब्यु गरेको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । एक वर्ष यसै बित्यो । तर, अनेक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण त छँदैछ । बार्सिलोनाको पूर्वखेलाडी तथा नयाँ क्लबका हिसाबले जापानमा पहिलो वर्ष निकै खास छ ।’
‘म उत्सुक छु कि, पूर्वक्लब बार्सिलोना हालको मेरो सहरको भ्रमण गर्दैछ । यसमा कुनै शंका छैन कि, यो दुवै पक्षका लागि निकै विशेष हुनेछ । बुस्केट्स, अल्बा र राकिटिकविरुद्धको मेरो पहिलो खेल निकै फरक हुनेछ । मेरा लागि यो भावनात्मक खेल हुनेछ । मलाई विश्वास छ, यस खेलमा हामी सबैलाई मज्जा आउनेछ । र, भिसेल कोबेका समर्थकहरूले पनि एक रोमाञ्चक खेलको मज्जा लिन पाउनेछन् ।’
प्रकाशित मिति ५ श्रावण २०७६, आईतवार ०५:३६